दशैं बिशेष Archives - Banking Khabar
दशैं दक्षिणा : नानीवावुले कति कमाए ? बैंक खाता खोलेर जम्मा गरिदिने कि ?
बैंकिङ खबर । दशैंमा पक्कैपनि तपाईका वालबच्चाले केही न केही रकम दक्षिणाबाट कमाएका होलान् । नेपालीहरुको महान् चाड दशैँ ससाना बालबालिकाहरुका लागि दक्षिणा पाउने चाड पनि हो । यो बेलामा घर, आफन्त लगायतबाट टीका लगाएर पाएको दक्षिणा उनीहरुले कि त चकलेट, चाउचाउ जस्ता अस्वस्थ खानेकुरामा खर्च गरेर सिध्याउँछन् कि त बुबाआमाले आफैँ खर्च गरेर सक्छन् ।
बैंकिङ खबर । धितोपत्र बजारमा प्रवेश गरेकाहरु सबैले धितोपत्र बजारबारे सम्पूर्ण कुराहरु जानेका हुन्छन् भन्ने हैन । कतिपय मानिसहरु साथीभाईको लहलहैमा लागेर पनि शेयर कारोबारमा हात हाल्छन् । तर, बजारसम्बन्धि सामान्य कुराहरु नबुझ्दा आफूलाई निकै पछाडि परेको महशूस गर्छन् । त्यस्तै, कतिपय मानिसहरु धितोपत्र बजारबारे आवश्यक जानकारी नहुँदा बजारमा छिर्ने रहर मनमै पालेर बसेका हुन्छन् ।
उदिप लुइटेल – महिनौं लामो झरीको मौसम सकिएपछि शरद ऋतुको प्रवेश सँगै असोज महिनालेहिन्दु नेपालीहरुको महान चाड बडादशैलाई स्वागत गर्दछ। खेतमा धान झुलेको बेला किसानहरु फुर्सदिला हुन्छन्।अचाक्ली गर्मी सकिन्छ र मुटु कमाउने सिरेटो आएको हुँदैन। कलिलो घामको किरणले दशैमनाउनथपउर्जा प्रदान गर्दछ भन्दा दुइमत नहोला । नेपाली भित्तेपत्रो पल्टाएर हेर्ने हो भने हामी वर्षभरी नै (
स्मारिका अग्रवाल, बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग भइरहेको हुन्छ । आवेदन पनि थुप्रै पर्ने गर्छ । तर, छनौटका क्रममा बैंकहरुले आफूले खोजेजस्तो आवेदक नपाएको गुनासो गर्छन् । यता, आवेदकहरु आफू किनछनौट भइएन भन्नेमा अलमल पर्छन् । कुनै पनि बैंकमा जागीर खानको लागि लिखित परीक्षाको तयारी गर्दा थुप्रै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ
बैंकिङ खबर । वादी समुदाय नेपालको एउटा पछाडि परेको समुदाय हो । गरीवि र अशिक्षाका कारण उनीहरुको जीवनस्तर कम्जोर बनेको छ । आर्थिक पार्जनमा पहुँच छैन । सरकारले धेरै बर्ष अघि हलीया प्रथासँर्गै वादी प्रथाको पनि अन्त्य घोषणा गरेको थियो । वादी समुदाय खास गरी देह व्यापारमा संलग्न हुँदै आएको समुदाय हो । उनीहरुलाई देह व्यापारबाट
दशैं टिप्स : दक्षिणाबाट खाता खोलाउने, खाली समय डिजिटल कारोबार सिकाउने
बैंकिङ खबर । नेपालीहरुको महान् चार्ड दशैँ नजिकिँदै गर्दा अविभावकहरु खर्च बढ्ने पीरमा छन् भने बालबालिकाहरु दक्षिणा पाइने खुसीमा रमाईरहेका छन् । वित्तीय साक्षरताको अभावमा मानिसहरु धेरै खर्च गर्ने र बचतमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति अपनाइरहेका छन् । बचतको महत्व नबुझ्दा मानिसहरुले आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सकिरहेका छैनन् । वित्तीय साक्षरता भन्नु पैसाले कसरी, कति र के